Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta, Rashford, Pogba, Dybala, Bernardeschi, Khedira, Bissouma
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta, Rashford, Pogba, Dybala, Bernardeschi, Khedira, Bissouma
December 19, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Garabka weerar ee kooxda Manchester United ee Marcus Rashford oo 23 sano jir ah ayaa la filayaa inuu heshiis cusub oo qaali ah u saxeexi doono kooxdaas sanadka cusub. (Mirror)
Weeraryahan Paulo Dybala iyo Federico Bernardeschi ayaa kamid ah xiddigaha ay Juventus u bandhigtay Man United si ay heshiis ciyaaryahano is dhaafsi ugaga hesho Paul Pogba oo 27 sano jir ah. (ESPN)
Tababaraha Everton ee Carlo Ancelotti ayaa kor u qaaday fursada uu dib ugula midoobi karo Sami Khedira isaga oo diiday inuu meesha ka saaro inay u dhaqaaqayaan saxeexa 33 sano jirka Juventus. (Mail)
Khadka dhexe ee kooxda Brighton iyo xulka Mali ee Yves Bissouma oo 24 sano jir ah ayay si dhaw ula socotaa Liverpool oo u aragta bedelka Gini Wijnaldum oo 30 sano jir ah isla markaana heshiiskiisa Anfield dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. (ESPN)
Inter Milan ayaa dhigeeda ree Spain ee Barcelona kula dagaalamaysa saxeexa Wijnaldum. (Tuttomercato – in Italian)
Sheffield United ayaa xiisaynaysa inay qaab amaah ah Man United kaga qaadato saxeexa Jesse Lingard bisha January. (Manchester Evening News)
Mesut Ozil ayaa joogi doona Arsenal inta heshiiskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan balse 32 sano jirkaas ayaa kooxo badan dalabaad ka helaya waxaana kamid ah Fenerbahce. (Eurosport)
Bar-tilmaameedka Liverpool ee Ozan Kabak ayaa la sheegayaa inuu ku dhaw yahay inuu go’aan ka gaadho mustaqbalkiisa, 20 sano jirka daafaca dhexe ee kooxda Schalke iyo xulka Turkey-ga ayaa la sheegayaa inuu doorbidayo inuu AC Milan ku biiro. (Express)
Khadka dhexe ee Tottenham ee Gedson Fernandes ayaa suuqa January ku laabanaya kooxdiisii Benfica oo kansalaysa heshiiska amaahda ah ee uu Spurs kula joogay ee ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan ku ekaa. (Jornal de Noticias, via Sport Witness)
Manchester City ayaa diyaar u ah inay dhagaysato dalabaadka u imanaya 24 sano jirka kooxdeeda ee Oleksandr Zinchenko (90 Min)
Liverpool ayaan lahayn wax qorshe ah oo ay dib ugu soo celinayso bisha January 17 sano jirka amaahda kaga maqan kooxdeeda ee Harvey Elliot oo Blackburn Rovers ku sugan. (Liverpool Echo)